Chelsea oo £100million ku soo qaadaneysa Lewandowski iyo Falcao | XIDIGAHA — Isha Koowaad Ee Ciyaaraha
Home » Maxaa Cusub » Chelsea oo £100million ku soo qaadaneysa Lewandowski iyo Falcao
Chelsea oo £100million ku soo qaadaneysa Lewandowski iyo Falcao	Kooxda Chesea ayaa ogaatay in mushkilada kooxdda ay hada ku hartay oo kaliya qeybta weerarka ,waxaana ay The Blus ku dhawaqday ololaheeda suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee xagaga soo aadan.
Kooxda caasimada ka dhisan ayaa sheegtay in labo weeraryahan oo wax tarkoodu muuqdo ay qarash fiican uhuri doonan.
Sida ay qortay jariirada The London Evening Standard naadiga Chelsea ayaa £100million, u adeegsan doonta saxiixa weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund Robert Lewandowski iyo dhaliyaha sare ee kooxda Atletico Madrid, Radamel Falcao.
The London Evening Standard ayaa sheegtay in qorshahan uu yahay amar ka yimid Jose Mourinho kaas oo lagu wado in uu kooxda dib ula wareego.
Dagaalka Chelsea ee ku wajahan Robert Lewandowski iyo Radamel Falcao ayaa la sheegay in ay soo da dajin karto in uu mid baxo xidigaha Torres iyo Ba.